Warbixin: Miyuu soo dhamaaday waayihii Barcelona?
Home Sports Warbixin: Miyuu soo dhamaaday waayihii Barcelona?
Barcelona aya sanadjkii 2-aad oo xiriir ah ku hartay wareega 8 dhamaadka Champion League, waxaana markaan ka cirib tiray marwada duqda ah ee Juventus.
Hadaba waxaan halkan idinkugu soo gudbin dhowr su’aalood oo u baahan jawaabo, kuwaasoo kala ah, Maxaa ka qaldan Barcelona?, yaa iska leh eeda? Iyo xalka lagu xalin karo dhibaatada haysata..
Tababare Luis Enrique, ayaa dhawaan sheegay inuu isaga tagayo shaqada Barcelona marka uu dhamaado xili ciyaareedkan, sidoo kale waxaa jira dhowr ciyaaryahan oo aan ku faraxsaneen sii joogista Barcelona kuwaasoo doonaya ineey isaga tagaan.
Sidaas darted su’aasha ugu weyn ee jawaabta u baahan ayaa ah, xagee ayay waxaanoo dhan ka qaldanyihiin?
Hal Eray: Waa saxiixyada qaldan ee ay Barcelona lasoo wareegtay xagaagan marka laga reebo daafaca dambe ee Reer France Samuel Umtiti, kadib saxiixii Suarez sanadkii 2014 kala soowareegeen Liverpool Barca sooma iibsan ciyaaryahan tayo leh.
Waxeey £30m kusoo iibsadeen Arda Turan, waxa uu ku fashilmay inuu boos joogto ah ka helo kooxda 1-aad,Sidoo kale waxeey xagaagan VALENCIA £30m uga soo iibsadeen Andrea Gomes, isagana waa ku fashilmay inuu soo jiito maamulka iyo taageerayaasha.
Sidoo kale isla xagaagii hore waxeey £30m Valencia, uga soo iibsadeen Paco Alcacer, kaasoo isna fashilmay.
Si lamid ah for Aleix Vidal oo ay Sevilla £15m uga soo iibsadeen ayaa marar badan dhaawac ku seegay xagaagan kulamadii ay Barcelona ciyaartay, kaasoo loo keenay inuu buuxiyo Booskii uu baneeyay Dani Alves.
Robert Fernandez, oo ah Directorka Barcelona ayaa eeda leh mise macalin Enrique?
Hada 7 kulan oo kaliya ayaa ka hartay Horyaalka La Liga, hadaba maxeey taariikhda ka dhihi doontaa Enrique?
Hagaag Enrique iyo wiilashiisa wali waxeey awoodaan ineey ku guuleeystaan LA liga xagaagan waase hadii ay Axada Garaacaan Real oo 3 dhibcood ka koreeysa hal kulan oo u baaqdayna gacanta ku haaysata.
Enrique waxaa lagu xasuustaa inuu xili ciyaareedkiisi ugu horeeyay 3 koob oo waaweyn u qaaday Barcelona, balse sanadkaan waxa uu jaanis u haystaa Copa Del Rey iyo La Liga inuu u qaado taasoo taariikhda u geli doonta.
Yaa badali doona marka uu baxo Enrique?
Barcelona ayaa haysata 3 dooq oo Enrique u badali kara, kuwaasoo kala ah kuxigeenkiisa haatan Carlos Unzue, tababaraha Sevilla Jorge Sampaoli iyo kan Athletico Bilbao Ernesto Valverde.
Yeey lasoo saxiixan doonaan?
Barcelona waxeey u baahantahay daafac ka ciyaara garabka midig islamarkaasna u buuxiya booskii Dani Alves, sidoo kale waxeey u baahantahay daafac ka ciyaara garabka bidix maadaama Alba uu ku yimid hoos u dhac xoogan.
Sidoo kale Barcelona waxeey aad u tebtay booskii uu baneeyay Xavi, sidaa darted waa ineey lasoo wareegta xidig buuxin kara booskaas.
Barcelona ayaa mudo dheer dooneysay ineey dib usoo ceshato xidigeedi hore Bellerin kaasoo garabka midi gee daafaca uga ciyaara Arsenal.
Marco Verratti, ayaa ah dooqa ugu horeeya ee Barcelona u buuxin kara booska Iniesta iyo Xavi, balse waxaa ku adkaan doonta ineey si sahlan ugala soo wareegaan PSG, asiga badalkiisa waxaa uga sahlan ineey lasoo wareegaan xidiga reer Brazil iyo Liverpool Coutinho oo doonaya inuu ka garab ciyaaro saaxiibkiisa Neymar.
Waa kuwa xidigaha la iibin doono?
Waxaa jira xidigo badan oo ay BARCELONA xagaagan dhigi doonto suuqa, waxaana ugu horeeya Javier Mascherano,Jeremy Mathieu,Turan iyo sidoo kale Gomes & Alcacer.
By Bashiir Addow Ahmed
Mohamed - April 16, 2018
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo goor dhow Shir...
Israel oo Soomaali xabsiyadda kasii deysay [Akhriso]
Qatar oo Gadiid ku wareejisay Gobolka Banaadir Xilli Xiisad adag taagan...